Gịnị mere na ọ bụ ihe dị mkpa ka ihichapụ akụkọ ihe mere eme na iPhone?
Ihichapụ akụkọ ihe mere eme nke gị iPhone dị mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-na-eche banyere nzuzo gị. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị nke na-enye ndị mmadụ gị iPhone mgbe na-achọghị ka ha na-ahụ ihe mere eme nke gị ojiji, mgbe ahụ, ihichapụ akụkọ ihe mere eme na gị iPhone kwesịrị-ọbụna ihe dị gị mkpa. Ọzọ mere nwere ike ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-ere gị iPhone ma ọ bụ nye ya ma ọ bụ ma eleghị anya, inye ya onye na, mgbe ahụ, dị ka nke ọma na ị ga-achọ ka ikpochapụ niile akụkọ ihe mere eme nke gị iPhone iji chebe gị nzuzo ma ọ bụ dị nnọọ ka efu nke data gị iPhone.
Otu Pịa doro anya nchọgharị akụkọ ihe mere na ndị ọzọ na akụkọ ihe mere eme na iPhone
Ọbụna ma ọ bụrụ gị kpamkpam ihichapu nchọgharị akụkọ ihe mere ma ọ bụ ndị ọzọ na akụkọ ihe mere eme na gị iPhone, e nwere ndị ka metụtara nke ọ na ike ga-natara iji ụfọdụ software. Ndị a na ụdị software ga miri-chọọ gị iPhone na-agbake furu efu data. Ụzọ kasị mma kpamkpam doro anya nchọgharị akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ na akụkọ ihe mere eme na gị iPhone bụ iji Wondershare SafeEraser kama. Wondershare SafeEraser bụ ọnụ ọgụgụ otu nzuzo nchebe na ngwá ọrụ gị iPhone na ndị ọzọ na iOS ngwaọrụ. Ọ bụ oké ngwá ọrụ na-ehichapụ ihe niile si iPhone na ndị ọzọ na iOS ngwaọrụ na nanị otu click. Ọ na-akwado ọ bụla onye ọrụ data na ngwaọrụ gị site na kọntaktsị, ozi, photos, videos, ngwa ọdịnala, akaụntụ Ama, okwuntughe na onwe onye ndị ọzọ data echekwara na ngwaọrụ gị, na ọ na-enye aka kpamkpam erasing data gị iOS ngwaọrụ iji gbochie njirimara na-ezu ohi mgbe na-ere ngwaọrụ gị ma ọ inye onyinye. Mgbe iji Wondershare SafeEraser ihichapu gị data na gị iPhone, ọ bụla ọzọ ma ọ bụ software technology ga-enwe ike agbake data ehichapụ. Ọ na-eme gị iPhone-akpa àgwà ka ọ bụrụ na ọ bụ ika ọhụrụ.
Mfe iji interface:-eme ya na-enweghị na-achọ ọrụ enyemaka.
Adị n'elu ngwaọrụ gị: adị n'elu ngwaọrụ gị nke kacha arụmọrụ.
Ihichapụ kpam kpam data: Hichapụ gị data na dịghị mgbe a ga natara n'agbanyeghị ihe-eji software.
All ọrụ data akwado: Ihichapu ụdị ọrụ data dị ka ozi kọntaktsị, foto, videos, ngwa ọdịnala, akaụntụ Ama, okwuntughe na ndị ọzọ.
Ikenyeneke mbiet nchebe maka gị data: Cheb'obi gị onwe faịlụ.
Magburu onwe foto Compressor: Belata size nke a foto iji nye ngwaọrụ gị ọzọ ohere ma na-edebe àgwà ka mbụ.
Olee otú iji Wondershare SafeEraser ikpochapụ ihe mere eme nile na gị iPhone
E nwere dị iche iche akụkọ dị na iPhone. The isi ndị bụ nchọgharị akụkọ ihe mere, na-akpọ akụkọ ihe mere eme na ozi. N'agbanyeghị nke akụkọ ihe mere eme ụdị, Wondershare SafeEraser erases ha niile na-enweghị na-ahapụ ihe ọ bụla Chọpụta.
Hichapụ nchọgharị akụkọ ihe mere na Wondershare SafeEraser
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Wondershare SafeEraser site na ịpị njikọ n'elu.
Nzọụkwụ 3: Pịa "ihichapu Private Data" n'etiti nhọrọ na isi SafeEraser window.
Nzọụkwụ 4: Chere maka Wondershare SafeEraser na-akpaghị aka nyochaa na iṅomi data ugbu na ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 5: Mgbe scanning zuru ezu, gị onwe data ga-edepụtara kwupụta n'aka ekpe nke SafeEraser window site na ige. Lelee "Safari History", "Safari Cache" na "Safari Kuki" igbe na pịa "Ihichapu Ugbu a," bọtịnụ na ala nke window ihichapụ kpam kpam gị oku akụkọ ihe mere eme. The "Safari Cache" na "Safari Kuki" na-echekwa paswọọdụ gị ma ozi onwe ndị ọzọ na Ya mere erasing ha dị mkpa dị ka mma.
Nzọụkwụ 6: Na ọzọ window, ị ga-kpaliri pịnye okwu "Hichapụ" ihichapụ kpam kpam họrọ data gị iPhone. Pịnye ihichapụ ma pịa "Ihichapu Ugbu a" bọtịnụ ka ihichapụ na-adịgide adịgide na ihichapu gị oku akụkọ ihe mere eme n'ụzọ zuru ezu.
Mgbe nchọgharị akụkọ ihe mere e ehichapụ, ị ga-a "merie ehichapu" ozi dị ka hụrụ na foto n'okpuru.
Ihichapu ọzọ akụkọ dị ka oku akụkọ ihe mere, ozi, wdg, nanị họrọ oku akụkọ ihe mere taabụ ma ọ bụ ozi taabụ na n'aka ekpe nke window kama Safari akụkọ ihe mere eme n'oge a na pịa ihichapu button ihichapu ha.
Mgbe akụkọ ihe mere eme e ọma ehichapu, ọ ga-adịgide adịgide-ehichapụ site na ekwentị gị na ike mgbe-natara.
20 bara uru Atụmatụ na-ere eji iPhone na Best Ahịa
> Resource> Ihichapu> Olee otú iji Hichapụ History na iPhone